Component: misy ny bara fototra, plunger, barika ivelany, satroka miaro ary tendron-kateter.
Fampiasana niniana: Ho an'ny toeram-pitsaboana, ny gynecology hanasa ny ratra na ny lava-vatan'olombelona
Karazana: karazana A (karazana peratra hisintona), karazana B (karazana Push), karazana C (karazana Capsule Ball).
Fahamarinana avo lenta, tanàna misy fahaiza-miaina sy fahatsapana
Tsy mila fitaovana, mahazo valiny ao anatin'ny 15 minitra
Fitehirizana ny hafanan'ny efitrano
Ohatra: Swab Nares an'ny olombelona teo aloha
Fantaro ny fisian'ny proteinina viral
Fantaro ny aretina mahery vaika na aloha
Sinopharm BBIBP-CorV COVID-19 dia vaksinina tsy nihetsika iray namboarina avy amin'ny tsimokaretina virtoaly nambolena tamin'ny kolontsaina izay tsy manana fahaiza-manao pathogenika. Ity mpifaninana vaksinin'ny vaksiny ity dia novokarin'ny Sinopharm Holdings sy ny Institute of Biolojika ao Beijing.
Maskotra NOSH Dust Mask N95 Mask
NIOSH nankatoavina N95 voamarina ho farafaharatsiny fahombiazan'ny filtration 95% ho an'ny sombin-tsolika tsy misy solika. [Fankatoavana NIOSH #: TC-84A-7861]
Ny orona orona azo ovaina dia manampy amin'ny fahazoana tombo-kase azo antoka.
Ireo fitaovana mateza sy tsy misy tara-tara dia manome antoka fa mety tsara
Mifanaraka amina eyewear miaro sy fiarovana amin'ny sofina maro karazana.
Haino aman-jery elektrostatika mandroso natao ho an'ny fifohana rivotra mora
saron-tava vovoka NIOSH azo aforitra N95 saron-tava
NIOSH nankatoavina N95 voamarina ho farafaharatsiny fahombiazan'ny filtration 95% ho an'ny sombin-tsolika tsy misy solika. [Fankatoavana NIOSH #: TC-84A-7861] Ny rakotra orona azo ovaina dia manampy amin'ny fahazoana tombo-kase azo antoka. Fitaovana mateza sy tsy misy tara-tara dia manome antoka fa mety tsara mifanaraka aminy miaraka amin'ny masomaso fiarovana sy fiarovana amin'ny sofina maro karazana. Haino aman-jery elektrostatika mandroso natao ho an'ny fifohana rivotra mora
Saron-tava Professional Respirator Face Ffp3
Ny respiratera mivelatra dia natao mba hampahazo aina azy, mahomby hiarovana, ary ambany ny fanoherana ny fifohana rivotra, ka mahomby sy mahomby. Ity FFP3 NR particulate respirator ity dia saron-tava antsasaky ny sivana 4-layer mivalona miaraka amin'ny valizy, misy fehiloha azo ovaina, sombin-tsofina anaty anaty ary orona vy. Ny sombin-tsofina intranasal malefaka dia manome: 1. Tombo-kase nohatsaraina 2. Fanamafisana ny mpangataka nohatsaraina 3. Fanokanan-tena tsara kokoa: Ny fehikibo vita amin'ny elastika azo ovaina dia manome: 1. Azo antoka kokoa ny tarehy, ny tarehy sy ny loha ary ny hatoka.
3-layer mifoka rivotra: ny sosona 3 dia afaka manakana ny sombin-javatra kely kokoa amin'ny rivotra ary manivana azy io mba hampihenana ny fahamendrehana amin'ny fanaovana sarontava.
Volavola mandinika: ny clip orona tafiditra dia afaka manampy amin'ny tetezana orona sy mampihena ny fogging amin'ny solomaso. Loopan'ny sofina marefo: ny tadin'ny sofina somary lasitike dia manisy tsindry kely fotsiny amin'ny sofina sy tarehy, mba hialana amin'ny alahelo mifandraika amin'ny fampiasana maharitra.
TSY MAINTSY AMIN'NY FOMBA FIAINANA SY FONENANA: Kit ny fikarakarana manokana ho an'ny fampiasana isan'andro, ho an'ny trano sy ny birao, ny sekoly sy ny any ivelany, ny serivisy ary ny filan'ny tena manokana. Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny namana.
Product fepetra fepetra:
1. Fahombiazan'ny filtration
Fahombiazan'ny filtration ho an'ny Particle tsy misy menaka sy vovoka 295%
2 fanoherana ny fifohana rivotra
Ny fanoherana inhalation tanteraka of350Pa
3 Fanoherana fanoherana
Ny totalin'ny fanoherana ny fofonaina250 Pa
4, Herin'ny fehin-kibo lohan-doha
210N amin'ny 10 segondra
Fenitra: 42 CFR 84
Fiainana talantalana: 5 taona
Fonon-tanana fanadinana vinina (fonon-tanana fanadinana PVC)
Loko: Fitaovana mangarahara: Position an'ny tsenan'ny PVC: Fampiharana ara-pahasalamana: Ho an'ny fizaham-pahasalamana sy ara-pahasalamana, fitaizana be antitra, fizahana am-bava ary fampiharana hafa mifandraika amin'izany; Manome fiarovana ara-pahasalamana mahomby ho an'ireo marary sy mpampiasa, ary manampy amin'ny fisorohana ny fifindran'ny tsimok'aretina.50 kitapo / boaty, fonon-tànana / kitapo 2; vita amin'ny PVC, tsy misy vovoka.